Nepal Dayari | बधाई छ ! चर्चित हास्य टेली सिरियल कि कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बनिन्,, छोरा भयो कि छोरी हेर्नुस्
बधाई छ ! चर्चित हास्य टेली सिरियल कि कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बनिन्,, छोरा भयो कि छोरी हेर्नुस्
असार २२, २०७८ मंगलबार ५६३ पटक हेरिएको
बधाई छ ! चर्चित हास्य टेली सिरियल कि कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बनिन्,, छोरा भयो कि छोरी हेर्नुस
काठमाडौँ । भद्रगोल, सक्किगोनी, लगायतका चर्चित सिरियलकी कलाकार र’क्षा श्रेष्ठ आमा बनिन् । छोरालाई ज’न्मदिए पछि र’क्षा र उनका पति छन् खुशीले फुरु’गं । सु’त्केरी भए पनि र’क्षाले छि’ट्टै फेरी सक्कि’गोनीमा अभिनय गर्ने भइन् । रक्षालाई यति मोटो रकम दिन जि’ग्री पाँ’डे भए तयार ।
कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा ब’न्ने खुलासा भएको छ । हास्य टेलिसिरियल भद्रगोलबाट चर्चामा आएकी श्रेष्ठ बिबाह भएको लामो समयपछि आमा ब’न्न लागेको कुरा एक युट्युब च्यानलबाट बाहिरिएको हो ।
हालै एक युट्युव च्यानलसँको कुराकानीमा भद्रगोल टिमले यसबारे खुलासा गरेको हो । कुराकानीमा रक्षा गर्भवती भएका का’रण उनी अब छि’ट्टै पुनः प्रशारण हुन लागेको सक्कि’गोनिमा नदेखिने सम्भावना रहेको बताइएको छ । भद्र’गोलबाट चर्चामा आएकी रक्षाले १ सयभन्दा बढी म्युजिक भिडियो तथा ६० भन्दा बढी विज्ञापनमा अभिनय गरेकी छिन् ।